Sidee loo xiraa lambar ku jira iOS 9 | Wararka IPhone
Sida loo xakameeyo nambarka macruufka 9
Su'aal ah in isticmaaleyaal badani ku cusub yihiin macruufka iyo adeegsadeyaal khibrad badan leh oo aan waligood isweydiin karin ayaa ah waad xannibi kartaa lambar adiga oo aan lahayn JAILBILA. Jawaabtu waa haa oo, intaa waxaa dheer, in sidaa la yeelo waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan socod ku dhex marno arjiga Taleefoonka (laga bilaabo arjiga Xiriirada ee aanan awoodin) halkaasna waxaan ku arki doonaa ikhtiyaarka.
Suurtagalnimada, taas oo waxaa laga heli karaa macruufka 7, Isticmaalayaal badan ayaa sii wada inay ku sameeyaan qaab aad u "qalafsan", taas oo ah furitaanka goobaha, xulashada "taleefan" ama "farriimo", iyagoo tagaya "xiriirada xirmay" ka dibna taabanaya "Ku dar cusub". Way kafiican tahay tan waxaan uga tagnay uun inaan ogaano xiriirada xirmay iyagoon mid mid u eegin. Qaabka looga hortago lambarka taleefanka ayaa aad uga fudud.
Waxaan fureynaa arjiga phone.
Waan ciyaarnay Xiriirada iyo xulo xiriirka in aan dooneyno inaan xannibo.
Hoos ayaan u siibaneynaa gebi ahaanba ilaa aad aragto Jooji xiriirkan. Halkaas ayaan ku ciyaarnay.
Daaqadda pop-up-ka, ayaan ku taabannaa Xiriir xir.
Sida aad ku arki karto fariinta, ma heli doonno wicitaanno taleefan oo caadi ah, SMS ama FaceTime, Video iyo FaceTime Audio labadaba. Way fiicnaan laheyd haddii Apple intaas oo dhan ku fidiso inta ka hartay codsiyada haddii aan rabno, laakiin waxaan u maleynayaa inay tani wax badan weydiin doonto, sax?
Haddii waqti ka dib aad rabto inaad aragto lambarrada aad xanibtay, waa inaad tagtaa Dejinta / Telefoonka (ama Farriimaha) oo fiiri «Xiriirada xirmay». Intaas waxaa sii dheer, halkaa waad ka furan kartaa oo kaliya hal lambar taleefan oo qof ah, taas oo ku imaan kara waxtar leh haddii aad kaliya rabto inaad ka hortagto lambar dhowr ah oo xiriir leh
Haddii aad hesho wicitaano badan oo taleefan ah oo aadan rabin in lagaa soo waco oo aadan rabin inaad ku darto ajendahaaga, talo bixin aan sameeyo ayaa ah inaad abuurto xiriir sida kan sawirka soo socda ah:
Isla xiriirkaas waxaad ku dari kartaa dhammaan taleefannada kugu dhibaya inta badan. Tusaale ahaan, waxaan ku hayaa taleefanno badan oo halkaas jooga oo ah waxa kaliya ee ay qabtaan (ama sameeyeen, runta ayaa ah inaanan garan karin) inay iigu yeeraan inay i siiyaan wax soo saar aanan runtii u baahnayn oo aanan xitaa xiisaynayn. gudaha. Adoo xiraya nambarkooda mar dambe dhib iguma dhibi doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo xakameeyo nambarka macruufka 9
Waad ogtahay in waxyaabo kale aanan sharxi karin haddii barnaamijka taleefanka uu sameeyo oo uu leeyahay ikhtiyaarro kafiican (si cad) marka loo eego barnaamijka Xiriirka, barnaamijkaas ayaa jira (Xiriiro)
Haye, masiixi Adiga kaligaa ma tihid Ma aqaano haddii ay jiri doonaan dad u baahan inay ku arkaan arjiga qaab ajende ah si aysan u lumin, runti, laakiin muhiim maahan. Fikrad ahaan, ka tag barnaamijka Xiriirada ee iPad-ka iyo Telefoonka iPhone-ka.
Jawaab Pablo Aparicio
Sidee canshuuraha u saameeyaan qiimaha Apple waddan kasta
Filimkii ugu horreeyay ee dokumenteriga ah "Steve Jobs: Ninka mashiinka ku jira"